✍✍Muaz yakub✍ ✍
○Eeyyeen Rabbii sifaata guutuu qabuu fi hanqinna hunda irraa qulqulluu ta’etu caala. Hundeedhumarraa Gooftaan Gooftaa jedhamuuf hanqina hundarraa bilisa kan ta’ee fi sifaata (amaloota) gaggaarii fi gugguutuun kan ibsamu ta’uu qaba. Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa sifaanni (amaloonni) Isaa guutuu fi hanqina hundarraa kan qulqullaa’edha. Sifaanni (amaloonni) Isaa guutuu ta’uu wantoota Inni uumee irraa hubachuun ni danda’ama. Samiin utubaa malee dhaabbachuu fi baqaqiinsa homaatu kan hin qabne ta’uun Beekumsi, Dandeetti fi Ogummaan Rabbii guutuu ta’uu agarsiisa. Beekumsi, Dandeetti fi Ogummaan sifaata (amaloota) Rabbiiti.
○Hundeen amantii inni guddaan Rabbii Tokkichatti amanuudha. Amantiin namaa sirrii kan ta’u yoo Rabbii Olta’aatti shakkii tokko malee dhugaan amananiidha. Ta’uu baannan, namni jireenya isaa soba irratti ijaara. Rabbitti amanuun fixrah (uumama qulqulluu) nama hundaa keessa jiruudha. Garuu yeroo dhiyoo kana keessatti wantoonni nama rifachiisan argamaa jiru. Awroppaa irraa jalqabuun biyyoota biraatti babal’ataa kan jiruudha. Wanti nama rifachiisu kunis, “Eetisim (Ilhaad)” wanta jedhamuudha. Eetisimiin kuni "Rabbiin hin jiru, wantoonni kunniin ofiin argaman" jechuun labsa. Wanta ijaan mul’atu kana malee wanti ijaan hin mul’anne biraa hin jiru jechuun lallabu. Dhugumatti yaanni akkanaa yaada nama hollachiisu fi sodaachisuudha.
○Namoonni yeroo duri, wanta biraa Rabbiin waliin haa gabbaranii malee Rabbiin subhaanahu wa ta’aala akka jiru sirritti amanu. Kanaafi, waamichi (daaw’aan) ergamtoota guddaan Rabbii Tokkicha gabbaruutti waamudha malee Rabbiin akka jiru mirkaneessu miti. Sababni isaas, ummanni isaanii Rabbiin Guddaan akka jiru ni amanu. Garuu wanta biraa Isa waliin gabbaru. Namni yeroo ammaa jiraachu Khaaliqa kaadu, hangam sadarkaa salphinna isa gadi aanutti akka tare argisiisa. Qaroominni inni odeessu mushrikoota durii gadi akka ta’u isa taasise. Na’uuzubillahi minal-khizlaan (Salphinna irraa Rabbiin tiikfamna).
👌Dhaamsi nuti eegalle itti fufa channel keenya asii gadii JOIN gochuun kutaatee itti aanan argachuu dandeessu👇
--------> @abu_abdalah1 <--------
--------> @hafiz_jihad <--------
--------> @ibnutemiya6 <--------
--------> @keyralumma <--------
--------> @amirtemam1 <--------